ka hatramin'izao. Tsy nahitana trangana fanafihana intsony mantsy tany an-toerana raha araka ny vaovao avy amin’ny zandarimariam-pirenena. Notontosaina ny 18 febroary teo tao Moramanga ny tomban'ezaka ka ny Jeneraly Rakotobe Christian, Lefitry ny Komandin'ny zandarimariam-pirenena no nitarika, notronin'ireo tompon’andraikitra eo anivon'ny fandraharaham-panjakana, ny mpitandro filaminana sy ny fitaterana ary ny fizahantany. Tanjona ny ahafahan'ny rehetra mampiasa lalana ao anatin'ny fahalalahana sy ny filaminana misy fiarovana amin'ny fotoana rehetra, indrindra fa ny ain’ny vahoaka sy ny fananany. Ankehitriny aloha dia mbola ampiharina ny fepetra mitanjozotra miaraka arahana mpiaro (escorte) satria mbola marefo ny fandriampahalemana. Hamafisina hatrany ny fisafoana sy fiarovana eny amin'ireo toerana ahiana hisian'ny fanafian-jiolahy.